Iran: Tantara Ratsy Ara-nofo Nivoaka Tamin’ny Mediam-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2017 20:34 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, عربي, বাংলা, 日本語, 简体中文, 繁體中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Jiona 2007 ity adika eto ity)
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nandrakitra sy nampiditra lahatsary misy ny filoha lefitry ny sekolin'izy ireo, Hassan Madadi, miaraka amin'ny lobaka tsy mihidy, voalaza fa miomana hanao firaisana ara-nofo amin'ny mpianatra vehivavy ireo mpianatra ao amin'ny Oniversite Avaratra-Andrefan'i Iran, Zanjan. Nilaza ireo tranonkala sy bilaogy Iraniana maromaro fa nampandre ny Fikambanan'ny Mpianatra Islamika ao amin'ny oniversiteny ilay vehivavy satria noteren'ilay filoha lefitra hanao firaisana aminy.
Efa nanao fiampangana momba ny herisetra ara-nofo ataon'ireo manampahefana ny mpianatra ao amin'ny oniversite Iraniana hafa, anisan'izany ny Oniversite Kirmanshah, saingy tsy nisy vokany. Tamin'ity tranga ity, nazava ny porofo tao amin'ny mediam-bahoaka: mpianatra nanao fihetsiketsehana nandritra ny herinandro, alohan'ny fampiatoana ihany ny filoha lefitra. Niala tsiny sy nisaotra ny mpianatra ny filohan'ny Oniversite.
Indro ny lahatsary mampiseho ny filoha lefitry ny oniversite sahiran-tsaina tanteraka mihaino ny baikon’ ny mpianatra naka sary azy. Efa nisy nijery in-67.000 mahery tao anatin'ny 10 andro latsaka ny lahatsary.
Bilaogera Iraniana, Asmoun Abi nanoratra hoe [fa]:
I am living in a country where the only thing I get is a veil. I am living in a country where you look at me as somebody to sleep with. I am living in a country where in its most secure and cultured place, a woman gets violated.
Monina amin'ny firenena iray aho, izay ny hany zavatra azoko dia ny voaly. Monina amin'ny firenena iray aho, izay hijerevanao ahy toy ny olona iaraha- matory amin'ny olona. Monina amin'ny firenena iray aho, izay ao anatin'ny toerany azo antoka indrindra sy nandia fianarana indrindra, voaolana ny vehivavy.
Natsangan'ireo mpianatra ao amin'ny Oniversite Zanjan ny bilaogy Zanjan1387 mba hanomezana vaovao farany ho an'ireo mpamaky mikasika ny fihetsiketsehan'izy ireo. Ao amin'izany bilaogy izany, mahita [fa] isika fa mpianatra 1500 mahery no nanasonia fanangonan-tsonia mangataka amin'ny Minisitry ny Siansa mba handroaka ny filohan'ny Oniversite Zanjan. Namoaka sary sy lahatsary maromaro tamin'ireo fihetsiketsehana isan-karazany ihany koa ny bilaogy.
Nilaza [fa] i Sano fa manery ity vehivavy ity mba hiray aminy ny filoha lefitra ary mila “mariazy vonjimaika” 7 volana. Nilaza koa ilay bilaogera fa talohan'ity tranga ity, nisy ny tranga hafa tahaka izany koa.
Tourjan kosa nilaza [amin'ny teny farsi] fa ny tena mahaliana dia i Madadi, filoha lefitra izay nanao fitondratena ratsy, herinandro vitsy lasa, ary nilaza tamin'ny Fikambanan'ny Mpianatra Islamika fa hikatona izy ireo noho ny fitondrantena ratsy!